सार्वजनीक सम्पत्तिको चकुदारी गरेर नबस्ने : वाडा अध्यक्ष – CIN Nepal News & Online Radio Network
सार्वजनीक सम्पत्तिको चकुदारी गरेर नबस्ने : वाडा अध्यक्ष
By CINN सम्वादाता	 पछिल्लो अपडेट Jun 23, 2020 4,326 0
तिवारी यादव, वारा ।। परवानीपुर गाउपालिका वाडा न. ५ का वाडा अध्यक्ष रामेश्वर साह कलवारले सार्वजनीक सम्पत्तिको चकुदारी गरेर नबस्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । जनताको बलिदानी बाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को मुलमर्म लाइ लत्याउदै गाउ समाजको भलो चाहनेहरुको भावना लाइ ठेस पुर्याई रहेका छन् । नेपाल सरकारले मात्र नभई विश्वले नै पर्यावरणको समरक्षण गर्न लाइ वृक्षारोपण गरिरहेका छन् ।
तर गाउपलिकाको आखा नपुगेकोले स्थानीय जनताले गाउ समाजको भलो होस् भन्ने उदेश्यले सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गरी परवानीपुर गाउपालिका वाडा न. ५ को वरीपरि रहेका उधोग तथा कलकारखाना बाट निस्केका दुषित हावाबाट बाचन लाइ वृक्षहरु लगाएका छन् । म संग नसोधी कन त्यो वृक्षहरु लगाइएकोले आफु त्यसको जिमेवार नरहेको र समरक्षण नगर्ने भन्ने वाडा अध्यक्षले प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
लगाइएका वृक्षहरू समरक्षण नभएकोले बेचारा धिन जस्तो बनेको छ । फोहरी राजनीति गर्ने हरुको बिरुद्ध लड्ने मधेश जनविद्रोह समितिले उक्त वृक्षहरू लगाएका छन् । समितिका केन्द्रिय सदस्य अजय पटेलका अनुसार मसंग सोधेर वृक्ष लगाउ कि मेरो पार्टीको नाम हुन्छ भन्ने आफुलाइ वाडा अध्यक्षले भनेको पटेलले बताए । फोहरी राजनीतिक सोचले गरसित भएर आफ्नो पार्टी कार्यकर्ताहरु बाट भनेर लगाइएका वृक्षहरु लाइ मास्न लगाएको पटेलले आरोप लगाएका हुन् ।
पटेलले भने वृक्षलगाउने दिन पनि वहा लाइ प्रतिनिधित्व गर्न लाइ निम्तो दिएको थिए तर निम्तो स्वीकार गरि अनुपस्थित भएको बताए । हालको अवस्थामा तीरुखाहरुला मास्ने दृष्टिकोनले गाइबस्तु बाट चर्न लगाउने, वृक्षहरुको छेउछाउमा आगो बाल्ने कार्यगरी रुख हरु मासीरहेको पटेलको भनाइ रहेको छ ।
आजको पत्रकारिता युगमा अनलाइन खबरको महत्त्वपुर्ण भुमिका – मन्त्री घिमिरे
“प्यार हमे तोरा दिल जनसे करैछी हम” मोड्ल प्रकाश सुबेदिको गीत चर्चामा